Dhibaatooyin ma ku haysaa WiFi-ka iPhone-ka? Isku day xalalkan | Wararka IPhone
Paul Aparicio | | macruufka 9
Your iPhone kuma xirmi doono WiFi? Mar kasta oo la soo saaro nooc cusub oo ah nidaamka qalliinka, dhibaatooyin cusub ayaa soo baxa. Dhibaatooyinkani badanaa waxay la xiriiraan madax-bannaanida, kuleylka ama, waxa soo galitaankani ku saabsan yahay, isku xirka WiFi. Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa soo sheegay inaad haysato dhibaatooyinka markaad isku xireyso shabakadaada WiFi, wax aad u xanaaq badan oo xitaa saameyn taban ku leh qorshahayaga xogta. Qodobkaan waxaan ku tusi doonaa dhowr xal oo macquul ah mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee iPhone.
Waxa aan dooneyno ayaa ah inaad xal u hesho dhibaatooyinka caadiga ah ee WiFi ee iPhone ama iPad. ¿Maxaa la sameeyaa haddii aysan ogaan shabakadaha WiFi ama ay goyso? Calaamadda hooseysa? Fiiri xalalka soo socda ee aan soo jeedineyno maxaa yeelay waxay xallin doonaan dhibaatooyinka kaa haysta xiriirka internetka ee iPhone-kaaga adoo adeegsanaya shabakadaha wireless-ka.
1 Dib u bilow qalabkaaga
2 Iska ilow shabakada WiFi
3 Dib u deji Dejinta Shabakada
4 Kafee / kiciye kaaliyaha WiFi
5 Jooji adeegyada goobta isku xirka WiFi Network
6 Nadiifi soo celinta adoo adeegsanaya iTunes
Dib u bilow qalabkaaga
Waxa ugu horreeya ee aan isku dayi doonno waa inaan ka goyno oo aan dib ugu xirno WiFi-ga iPhone-keena, iPod ama Ipad. Waa waxa aan inbadan gacanta ku hayno (Xarunta Xakamaynta) waana tan ugu raaxada badan uguna dhaqsaha badan. Haddii tani aysan hagaajin, waxaan dib u bilaabi doonaa qalabkeena. Waxa xiga ee aan isku dayi doono ayaa ah dib u bilaabi router-keena.
Iska ilow shabakada WiFi
Wax shaqeyn kara ayaa ah iska ilow shabakadeena WiFi. Si tan loo sameeyo waxaan aadi doonnaa Settings / WiFi, waxaan taaban doonnaa «i» oo ku xiga shabakadeena WiFi waxaana taabaneysaa «Iska iloow shabakadan». Marka la iloobo, waxaan dib ula xiriirnaa gacanta si aan u eegno haddii dhibaatada la xalliyey.
Dib u deji Dejinta Shabakada
Haddii kor ku xusan aysan xallin dhibaatada, waxaan aadi doonnaa Settings / General / Reset / oo aan taaban doonnaa Dib u deji dejimaha shabakadda. Tani waxay dib u dejin doontaa goobaha shabakadda, sidaa darteed waa inaan dib-u-galnaa dhammaan furayaasha furaha shabakadaha WiFi iyo, laga yaabee, inaan dib-u-qaabeyno APN-ka hawlwadeenkeenna.
Kafee / kiciye kaaliyaha WiFi
Laga soo bilaabo macruufka 9-ka iPhone-ka, iPod-ka ama Ipad-ka ayaa ku xirmi kara shabakadda mobilada haddii WiFi uusan na siinin xiriir wanaagsan. Ikhtiyaarkan sidoo kale waa suuragal inuu nagu keenayo guuldarro, sidaa darteed waxaan isku dayi doonnaa inaan dhaqaajino / ka dhigno si aan u hubinno inuusan asalka u ahayn dhibaatooyinkeenna. Si aan u dhaqaajino / u kiciyo kaaliyaha WiFi waxaan aadi doonnaa xogta Settings / Mobile-ka oo aan dhaqaajineynaa / joojin doonnaa Caawinta WiFi.
Jooji adeegyada goobta isku xirka WiFi Network
Haddii dhibaatadu sii socoto, weli waxaan haysannaa hal shay oo aan tijaabinno. In la furo adeegyada goobta xiriirinta shabakadda WiFi waxaan aadi doonnaa Dejinta / Asturnaanta / Goobta / Adeegyada Nidaamka waxaanna joojin doonnaa iskuxirka shabakadda Wi-Fi.
Nadiifi soo celinta adoo adeegsanaya iTunes
Iyo, sida had iyo jeer, haddii midkoodna kor ku xusan uusan shaqeynin, waxaan ku sameyn doonnaa dib u soo celin nadiif ah iTunes si aan meesha uga saarno arrimaha software-ka.
IPhone-kaagu wali kuma xirna WiFi? Waxaan rajeyneynaa in khiyaanooyinkaan inaadan mar dambe wax dhibaato ah lahaan doonin markaad isku xireyso shabakad wireless ah oo ka socda iPhone ama iPad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 9 » Dhibaatooyin ma ku haysaa WiFi-ka iPhone-ka? Isku day xalalkan
99 faallooyin, ka tag taada
Ayaan (@ Ayaan_88) dijo
Waxaan la socdaa beta 2 ee iOS 9.1 oo dhamaan dhibaatooyinkii aan ku qabay wifi ee iOS 9.0 iyo iOS 9.0.1 waa la waayay
Jawaab Juan Fco Carretero (@ Juan_Fran_88)
hello sidee baan ula soo bixi karaa nooca beta-ka macruufka 9.1? cusbooneysii 9.0.1 mana ogola in aan dhaqaajiyo ama aan ku xirnaado wifi
Ku jawaab mariapaulabr
Midkoodna iima shaqeyn
Dhibaatadaydu waxay tahay inaan ku xirnaado shabakad markii aan ka dhaqaaqo modem-ka ayaa jarto
Ku jawaab Ihan
Waan ogahay in halkan uusan joogin, laakiin barnaamijyada twitter-ka iyo facebook aad ayey uga gaabinayaan macruufka 9. Waan rogrogmadaa kor ama hoos barnaamijyadu way boodaan. Waa rajo la'aan in iPhone 6 kuwan ay khibrad u leeyihiin
haa, wali waxaan dilaa macruufka 9.0.1 oo leh iphone 6 aad u gaabis aad u badan
Waxay ii sheegaysaa inaan ka baxo internetka oo aanan cusbooneysiin karin macruufka 9.3 waxna kuma cusboonayn karo
Waan ka gaabinaayay xiriirka Wi-Fi-ga iPhone-kayga laakiin maanta hal daqiiqad ilaa xigta ma aysan dooneynin inay mar dambe xirmaan, horeyba waan isku dayay wax walbo oo lagu sharaxay bogga, waxaan dib u bilaabayay nasashada xitaa shirkada internetka laakiin waxba ma shaqeyn , Waxaan dib ugu soo ceshay iPhone-ka wershedda qaabka, ka bilow eber h sidoo kale, maxaan sameyn karaa?
KA DIB U cusbooneysiinta macruufka 9.2 IMA OGOLAATO IN AAN SHAQEEYO AMA KU XIDHO WIFI .. waxay i tusaysaa astaamaha meertada madow leh markii aan hoos u wareegayo ilaa kor .. Caawinaad
Si la mid ah aniga ayaa igu dhacda, wax walba waan isku dayay walina waa sidii hore
Waxaan u qaatay moobilkeyga in lagu baaro ishop (waa qeybiyaha idman ee Mexico ee tufaaxa) waxay sameeyeen baaritaano waxayna ii sheegeen in wifi uu si sax ah u shaqeynayay inay macquul tahay inay tahay casriyeyn casriyeyn ah oo soo celin doonta (taas oo ay iigu sheegeen tufaax) sidoo kale cabsi darteed ma aanan sameynin waxaan u maleynayay in cusbooneysiinta ay wanaajineyso sidaas darteed way ka sii xumaatay munaasabadaha ay sameyneyso mararka qaarkoodna waxay qaadataa waqti in lagu xiro shabakadda Wi-Fi ee ah in la yiraahdo markii aan tago degel aan horey ugu lahaa mobilka tan sidoo kale waxay ku dhacdaa saaxiibkeyga ugu fiican) Waxaan u maleynayaa inay tahay cusbooneysiinta aan weli saxin qaladka Aadam ayaa ah ikhtiyaarka lagu soo celin karo, waxaad haysataa kayd intaadan ku sameyn icloud iyo barkinta baaritaanka iphone ka hor inta aadan dib u soo celinta iTunes ka sameysan adigoon wax kayd ah u dhigin sida cusub, iskuday maalin sidan oo kale ah oo aad iska hubiso, waxaad kala soo bixi kartaa xiriiriyaashaada nuqul ka mid ah icloud sababtoo ah hadaad ka soo celiso itunes adiga wuu ka gudbi karaa qaladka (waxay ahayd waxa uu ii sheegay lataliyaha guud ee taageerada) e de apple) waa inaad isku daydaa oo hadduusan had iyo jeer ahayn adeeggan farsamo
Wax la mid ah ayaa igu dhaca aniga sidoo kale oo sida ay yiraahdaan dhibaato ku tahay anteenada, waxayna sidoo kale dhahaan in nidaamku uusan ansax ahayn maxaa yeelay waxaa jira dhibaatooyinkan, Apple waa inuu sameeyaa wax la mid ah sidii uu sameeyay 4-ta oo uu u soo bandhigo noo beddel qalab.
Ku jawaab Yahily
Tani hadda aniga ayey igu dhaceysaa .. Taleefonka iphone-na wuxuu dib u bilaabaa marar badan, sidee u xalisay
Jawaab Judit Olivera
Waxay igu dhacday si isku mid ah ka dib markii la cusbooneysiiyay 9.2 aniga iPhone 6 wuxuu ku jiraa cawl mugdi ah wifi icon,
Waa lay dhaqaajiyaa laakiin ma arko calaamadda Wi-Fi, midkoodna ma ogaado iyaga
SALAAN JAVI MAQAL HADII AAD SIXIRI KARTO DHIBAATADAAS SIDEE AYAAD U QABATAY?
Ku jawaab livier
Sidoo kale waxaan ku haystaa dhibaatadaas iphone 4s-ka, daqiiqad ilaa daqiiqad kale waxaan joojiyay qabashada wifi, wali waxaan heystay ikhtiyaar aan ku dhaqaajiyo / joojiyo, dhibaatada kaliya waxay aheyd inaan shabakad laga helin, ama gurigayga ama mid kale dhinaca, laakiin dib u soo celinta goobaha shabakadda, dhibaatadu way ka sii dartay (waad dhihi kartaa) xarunta xakamaynta astaamaha wi-fi waxaa lagu beddelay goobaabin cirro leh, aniga oo iga ilaalinaysa inaan dhaqaajiyo, xitaa waxaan ku leeyahay xulashooyinka qaabeynta way iga hortageysaa samee, adoo xiraya shaashadda oo dhan, oo leh midab cirro leh oo calaamad u ah inaysan suurtagal ahayn in la falgalo qaybtaas.
Runtu waxay tahay inaanan mar dambe dooneyn inaan isku dayo mid uun hababka kale si aanan u dhumin waqtigayga, hadda waa inaan u tago oo kaliya farsamo yaqaan si aan u hubiyo arrinta una xaqiijiyo inaysan dhibaato ku ahayn barnaamijka, laakiin qalabka.
Wax la mid ah ayaa igu dhacay aniga oo aan ku xaliyay qaab la yaab leh ... sim ayaan ka saaray oo aan dib u bilaabay bilaa sim waxaana ay durbaba ii ogolaatay inaan galo goobaha wi-fi oo aan si caadi ah ugu xirmo
Thanks Dzzy ami tmb way ii shaqaysay.
Ku jawaab joanpierr
Aad baad u mahadsan tihiin waxaan isku dayay waxyaabo badan laakiin tani waxay ahayd waxa kaliya ee aniga ii shaqeeyay
Hi MAX, wax la mid ah ayaa igu dhaca aniga oo wata iPhone 6, Ma garanayo waxa dambe oo aan sameeyo. Ma heshay wax xal ah?
tan iyo casriyayntii ugu dambeysay ee iphone-kayga xiriirka wi-fi waa masiibo… Waa inaan ka yaraa 3m routerka si aan u helo calaamadda !!!! Haddii aan ka fogaado in ka badan 5m waan luminayaa !!!!
Isla waxbaa igu dhaca Alicia, hadaad xal hesho fadlan ii sheeg.
Aad baad ugu mahadsantahay horay iyo salaan
Isla waxbaa igu dhaca, waxay ii sheegeen in anteenadu ay waxyeello soo gaari karto. Haddii aad xal heshay, fadlan la wadaag, waad quusantahay.
Waxaan hayaa iPhone 6 mana haysto kamarada tif internet icon !! Sideen uga dhigaa inay muuqato? Qosol badan
Ku jawaab Guillermo arce
Guille iyo kuwa kaleba wax lamid ah ayaa igu dhaca aniga markii aan ka fogaado router-ka, calaamadi ayaa iga luntay, sidaa darteed waxaan doorbiday inaan badalo anteenada, waxaan helay anteeno cusub (iphone 5), waxaan badalay adeegii farsamada oo wali taleefanku waa isku mid ah, waxay lumisaa calaamadda markii aad ka dhaqaaqeyso router…. saaxiibayaal, dhibaatadu ma ahan anteeno, dhibaatadu waxay ku jirtaa wifi chipka loox weyn :(, waxaa lagu xaliyaa iyadoo la adeegsanayo kuleylka la xakameynayo (dib u soo celinta) dusha sare ee su'aasha iyadoo aan la aflagaadeynin sidaasna lagu gaaro isku xirnaanta iyadoon dib loo lumin again Nasiib wacan qof walba
Ku jawaab nelber vega
Waxaan haystaa 6 lagu daray IOS 9.2 iyo isku xirka Wi-Fi si fiican uma shaqeynayo, taleefannada kale ee gacanta ee wata isla Android isla shabakaduna way duulayaan aniguna waxaan jeclahay gaari gaabis ah !!! Horeyba waan iskudayay wax walbana waa isku mid, sidoo kale marka calusyada kale oo dhami ay ogaadaan shabakada Wi-Fi, kayga ma sameeyo, waa inaan isku dayaa dhowr jeer si aan u gaaro. Waan kululahay !!! Laakiin tusaale ahaan, haddii aan haysto astaamo 3G ama LTE wanaagsan, taleefankayga gacanta ayaa aad uga dheereeya Wi-Fi !!! fadlan caawi !!
Jawaab carlos B
Waxaan sidoo kale leeyahay dhibaato isku mid ah, aad u caajis badan maxaa yeelay gurigeyga calaamadda ka socota hawlwadeenku aad ayuu u hooseeyaa, waajibna waa inaan ku xiraa Wi-Fi, laakiin tan iyo cusbooneysiinta iOS 9 ... run ahaantii waan ka xumahay iPhone, halkii laga hagaajin lahaa! Waxay hoos ugu dhacaan dhibaatooyinka noocan oo kale ah ee macquulka ah waxaan rajaynayaa in xal dhakhso leh loo helo, waxaan iibsanayaa android Waa wax aad iyo aad looga xumaado in lagu dhegto modemka IPHONE 6 oo lagu daray in si fiican laysugu xiro
Ku jawaab Zpol
horay miyaad u xalisay?
Waad salaaman tahay, isla dhibaatadaas ayaan qabaa, wifi-kayga ima adeegin wax ka badan hal mitir oo ka fog router-ka, markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyayna wuu ka sii xumaaday, macno ahaan waa inaan agtiisa ahaadaa si aan u helo calaamado, waxaan doonayay inaan ogaado haddii aad xallin lahayd, ama haddii qof garanayo sida loo sameeyo, dhibaatadani waxay iga dhigeysaa mid quus ah.
Waxaan la cusbooneysiiyay macruufka 9.3.1 oo hadda waxay ku xiran tahay wifi laakiin ma wareego: ma qof baa wax la mid ah?
Ku jawaab Carlos manuel
Dhibaatooyin ayaan ku qabaa taleefankayga iPhone 6s Plus, wi-fi-ka ayaa soo muuqda, wuxuu i weydiinayaa furaha, haddii aan galo, waxaa ku qoran eray sir ah oo khaldan, waxaan hubiyaa kombuyuutarrada kale, lambarka sirta ah wuu fiicanyahay oo wuxuu isku xiraa wax caadi ah taasna waxay ku dhacdaa dhammaan wi-yada -fi shabakadaha, erayga sirta ah ee khaldan ayaa muuqda mana garanayo sida loo xaliyo wax walba waan qabtay laakiin ma shaqeynayo
Saaxiib si sax ah ayey igu dhacday maanta! Waxay i weydiisatay inaan cusbooneysiiyo cusbooneysiinteyda iPhone-ka iyo wifi-kayga wuu guuldareystaa, mararka qaarkood waxay qaadataa calaamadda oo buuxa laakiin ma dirto mana hesho xog ka badan mararka qaarkood.
Wanaagsan! Waxaan haystaa 6GB iPhone 64S Plus, shalay waan iibsaday oo waxaan haystaa dhibaato lamid ah: password qaldan xal ma heshay?
Waxaan dhab ahaan dhibaato la mid ah tan iyo markii la casriyeeyo si IOS 9.2. Telefoonkii gacanta ee aadka u kululaa iyo wifi xun, waxaan moodayay in taleefankayga gacanta uu dhaawacan yahay, hada waxaa jira Android oo cabiraya ilaa iOS iyo qiime aad u raaxo badan. Waxaan marwalba u dooran jiray iPhone tayada iyo cimri dhererkiisa, laakiin sida muuqata telefoonadan ayaa qaali noqonaya maalin walbana waxay siinayaan tayo yar iyo fudeyd macaamiisha. Waxay noqdeen summad uun iyo wax intaa dhaafsiisan.
aniga ahaan waxay isku xirtaa oo ka go'daa mararka qaarkood wifi (macruufka 9.2.1) durba way ka yartahay ios marka loo eego ios 9.2
Waa inaan aad ugu dhawaa router-ka si aan u helo shabakad! Dhibaatadani waxay wada baabbi'isaa dhammaan megabaytyada qorshahayga! Waxaan horeyba isugu dayay wax walba oo ay dhahaan iyo waxba.
hello qof iga caawi inaan cusbooneysiiyo macruufka 9.2.1. iyo astaanta wi fi waa cawlan daaran maayo.
Ku jawaab Ginnette
Qoraal aamin ah dijo
hello ginnette waan ka xumahay .. miyaad dhibaatadaada ku xallin kartaa wifi icon-ka oo midabkiisu cawl yahay mise weli waa isku mid ... Waxaan haystaa iphone 4s leh ios 9.2.1 oo isla mushkiladda ayaan leeyahay
Kujawaab Loyal Memo
hello Dhibaatooyin isku mid ah ayaan ku qabaa cusbooneysiintii ugu dambeysay ee macruufka 9.2.1 runta ayaa ah in kuwa tufaaxa ah aysan laheyn hooyo hadda waa in la sugaa illaa iyo Febraayo 5 wixii cusbooneysiinta soo socota
Dhibaato isku mid ah ayaan qabaa oo ma heli karo waddo aan ku xalliyo
Ahh xumaantaas illaa iyo maalmo ka hor waxaan bilaabay inaan arko isku-xirnaanta Wi-Fi ee daciifka ah waana inaan ahaadaa
Meel u dhow si uusan xiriirku u lumin waxaan haystaa nooca 9.2 waxaanan u maleeyay in wifi-kayga waxyeello soo gaadhay ama wax uun laakiin markaan akhriyayo dhammaan farriimaha waxaan arkaa dhibaatooyin badan oo aniga oo kale ah
Jawaab Juan Camilo Aguirre
Waxaan hayaa iphone 6. ma xidhayo wifi. Anigana marwalba waxaan helaa fariin qoraal ah oo kuwan soo socota. REG-RESP? V = 3; r = 1911692942; n = + 51942899868; s = 0256B2AC6EFFFFFFFF18D7C755DC4666E840B3E908770F9F631481CFC9
Waxaan horey u sameeyay talaabooyinka oo dhan laakiin waxba. Soo jeedin kasta?
Markaan tijaabiyay xulashooyinkii hore oo aanan helin xal wax ku ool ah, waxaan ka faalloonayaa in kiiskeyga waxa kaliya ee shaqeynayay ay ahayd joojinta habka awoodda hoose! Haddii ay wax kuu socdaan, iskuday tan!
Aniga ayay igu dhacdaa in ay isku xirmaan laakiin aysan marin. Waxaan isku dayay inaan aado shabakada, waxaan siinayaa Iska iloow Shabakadan, ka dib mar labaad ayaan isku xiraa, waxaan u gudbiyaa Proxy-ka habka otomaatigga ah waxaanan leeyahay Cusboonaysiinta Ijaarka. Waxa kaliya ayaa ah in mar kasta oo aad ka go'do shabakadda ama aad lumiso calaamadda masaafada darteed, waa inaad isla sidaas sameysaa.
Ku jawaab Holberth
SIDAN HADDAY SHAQAYNAYO, SIDAA XAL AH !! WAAN KU FARXSANAHAY, WAAD KU MAHADSAN TAHAY SHAWADAADA, WAAN KU SIIXAY. GUYS HAGANLOOO OMG
Jawaab ku bixi CINTHIA
Corriendito waxaan hada u socdaa inaan wifi microchip u badalo mobilo boqolaal leuro leh oo leh tabobar Ruush ah isla markaana kala jajabinayo iPhone kale oo hore, sida aanan horay uga fikirin.
Waxaan dhib ku qabay in IPHONE 6-kayga oo leh WIFI-kayga gurigayga leh 3 MB xawaare, aad ayuu gaabis u yahay, xitaa ma gali karo YOUTUBE, anigoo adeegsanaya xogta 3G way ka duwaneyd, iPhone-kayga wuxuu noqday diyaarad laakiin qiimaha waa qaali.
Waxa aan sameeyay waxay ahayd inaan uqalabeeyo my Laplink ROUTER oo aan badalo kanaalka loogu talagay inuu otomaatig u ahaado 1, waana intaas, iPhone-kayga hada wuxuu la duulaa WIFI-kayga.
Waxaan caddaynayaa inaanan tijaabada ku sameynin WIFI kale oo keli ah.
Heer sare iphone 6+, 9,2.1. way ii shaqaysay inaan dhaqaajiyo kaaliyaha wifi. Aad baad u mahadsantahay
Ku jawaab trucutu
Markii aan ku xirnaado shabakad kasta oo Wi-Fi ah (xitaa wadaagista Wi-Fi taleefan kale), waxay igu tuurtaa qalad ah eray sir ah oo aan sax ahayn, tani waxay igu dhacdaa dhammaan shabakadaha Wi-Fi ee aan isku dayo inaan ku xirnaado.
Haddii aad i caawin lahayd, waan ku qanacsanahay, maaddaama ay dhibaatooyin badan ii keento oo aan xog badan galiyo.
Isla waxbaa igu dhaca aniga, horay ayaad u xalisay
Cusboonaysii nooca 9.2.1 iyo gaariga sim ma i akhriyo wifi-na ma soo muuqdo si ay u muuqato waxaan ag dhigaa habka waxaanna leeyahay wifii furaha ayaan galiyay waxayna ii sheegaysaa inaan sax ahayn.
cusbooneysii iPhone-ka 6 oo leh ios 9.2.1 qaladka 53, iminkana ma heli karo shabakadaha wifi maadaama astaanta ay ka muuqato midab midabkeedu aad u jilicsan yahay oo aysan macquul aheyn in la kiciyo, ma i caawin kartaa
Waad salaaman tihiin asxaabta, waxaan la mid ahaa idinka oo saacado kadib markaan xal raadinayay waxaan aaday casri oo waxaan badalay magacii wifi iyo erayga sirta ah waxaanan qiyaasayaa inuu u shaqeeyay si sixir ah, waa router-ka mararka qaar ka baxa qaabeynta oo tanina way dhacdaa waxaan rajeynayaa in tani kaa caawin doonto HA ILOOBIN INAAD BADBAADISO ISBEDELKA !! Salaan ka timid Chile
Dib-u-dejinta Nidaamyada Shabakadda ayaa ii shaqeeyay. Waad ku mahadsantahay soo dhajinta xalka dhibaatadan.
Waad salaaman tihiin asxaabta, waxaan haystaa Iphone 4s isla markaana waxaan leeyahay isla dhibaatada wifi. kuma xirmi doonto, astaanta waa la cawday oo waxaan isku dayay dhammaan xulashooyinkii hore mana aysan ii shaqeyn Waxa kaliya ee aan ku arkay inaan ku arkayo casharrada youtube-ka waxay ahayd kuleylka iphone-ka oo leh timo-engejiye iyo ku kicinta dhismaha heerkulka. Mar alla markii ay shil gasho, sug in ay dib u bilowdo oo mar labaad dib u bilowdo. Dib u bilaw markii labaad, wifi waa la shaqeysiiyay waana lala xiriiri karaa iyada oo aan dhibaato jirin. Xalkani waa in muddo ah oo marka muuqaalka Wi-Fi uu mar kale cirro noqdo, waa inaad ku celisaa nidaamka. Waxaan fahansanahay in dhibaatadan ay tahay softiweer tufaaxuna wali wax xal ah ma uusan siinin. Waxaan rajeynayaa inay kuu shaqeyn doonto sidoo kale waxaan rajeynayaa in tufaaxu uu wax ka qabanayo dhibaatadan.
Waa salaaman tahay, waxaan isku dayay inaan cusbooneysiiyo iPhone 5-ka illaa iOS 9.3-kii kama-dambaysta ah ee haysta beta, waxay i siinaysaa qalad ii sheegaya inaan ka baxo internetka, waxaan sameeyay tallaabooyinkaaga oo dhan waxayna ii sheegaysaa isla wax la mid ah, waxaan u baahanahay caawintaada fadlan
Dhamaantiin waad salaaman tihiin, waxaan helay iPhone 6s Plus cusub oo Wi-Fi signaalkiisu waa sax laakiin waxaa jira bogag aan furo iyaga iyo mid kale oo aan dhigto bilaa calaamad, codsiyada qaarna way furaan midna waxaan helayaa koorta xiriirisa. Waxaan sameeyaa waa dhibaato dhamaadka ama waa cusbooneysiinta waxaan hayaa 9.3.1 mahadsanid
Waxaan haystaa iphone 6 oo lagu daray ios 6.3.1 mana helayo wifi signaal ... Waxaan ubaahanahay xalka dagdag ah .. Horay ayaan dib udajiyay goobihii, dib ayaan ugahelay 0 iyo waxba .. shabakad umuuqata
Xamaali Rafa dijo
Waad ku mahadsantahay caawimadaada, saaxiib hanad .., waxaan hada iibsaday iphone 6-gacan labaad marki horena ma helin shabakad qolka jimicsigayga ka dibna wifi wuu gaabiyay .., waanad ku mahadsantahay taladiina marhore waan xaliyay dhibaatooyinka ..
Ku jawaab xafaada Rafa
Dhibaato ayaan ku qabaa wifi-ka iphone 6, sifiican ayaan usameynayay ilaa aan cusbooneysiiyo iphone, si kadis ah usbuuc gudihiis wifi-kayga wuxuu bilaabay inuu xumaado, ilaa maantadan, aniga ima sii shaqeynayo.
Waxa dhacaya ayaa ah inkasta oo isku xirnaantaasi aysan shaqeynayn, oo aanan raadsan karin shabakad kale, haddii qof i caawin karo waa la ixtiraami lahaa.
Waxaan hayaa iPhone 6 calaamadda Wi-Fi-na way xun tahay! Waa inaan ku dhegaa router-ka si aan u helo calaamadda, in ka badan 3 mitir u jirta taleefankayga ma arko calaamadda! HADDII QOF XALKA LEH, FADLAN FALAN
Waad salaaman tihiin, isla dhibtii ayaan qabaa. Ma awoodday inaad xalliso?
Hello Yolanda, waxaan kuu sheegayaa inaan adeeg aaday oo ay badeleen anteenada signaalka, way xunayd. Waxay ahayd in lagu dhajiyo router-ka, wuxuu la mid yahay bluetooth, My 3G iyo 4G data si fiican ayey u shaqeeyeen, waxay igu kalliftay 45 doollar haddana wifi / bluetooth-gu wuxuu u shaqeeyaa si layaableh, waxay ahayd anteeno.
Waxaan leeyahay isla dhibaatadaas Cumar. Fadlan qof na caawi! Kaliya waxaan haystaa wifi haddii aan ku dhego nus mitir routerka. xogtaydu way duulaysaa !! fadlan caawi
qof ma leeyahay xiriir wifi random?
Ku jawaab MaFer
Waxaan hayaa iPhone 6, WiFi-ka oo midabkiisu cawlan yahay, blutooth-ka ma bilaabmayo, kaliya wuu sii wadaa wareegga, mar hore ayaan dib u bilaabay, dib u soo celiyey, dhigay qaboojiyaha, dib u soo celiyey wax kasta oo dib loo soo celin karo, dhaqaajin karo oo barkinta WiFi meesha xulashada iyo wax aan jirin.
Qof kastaa wuu ogyahay haddii ay jirto xal ama xambia r WiFi anteeno fiican.
Marka taa laga reebo waxay kululaataa kun oo soo deynta ufffff
Hello georg waxa saxda ah ee igu dhaca aniga !! Waxay igu dhacday 3 maalmood ka hor !!! Horay ma u xalin laheyd ???
Waxaan haystaa dhibaato isku mid ah oo nacalad ah oo ku saabsan wareegga, mar hore ayaan dib u bilaabay, dib u soo celiyay oo waxba ma jiraan
wali ma cusbooneysiisay? 9.3.2 wuu baxay
Miinadaydu waxay ka baxdaa WiFi markaan ku xiro iPhone-kayga, haddii ay tahay taleefan kale oo gacanta ah waxba ma dhacaan, laakiin markaan isku xiro iPhone-kayga wuxuu joojiyaa inuu u shaqeeyo qof walba, maxaan sameeyaa?
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, waxaan qabaa dhibaatada ah in la joojiyo wifi icon-ka, kumbuyuutarkaygu waa 4s IOS 9.2.1, waxaan isku dayay xalalka boostada oo waxba ma jiraan, waxa kaliya ee aan u baahanahay waa inaan cusbooneysiiyo kumbuyuutarka laakiin waxaan ku aqriyaa kuwa kale boostada in aan lagu talineynin inaad cusbooneysiiso maadaama aad tahay 4s lumineyso shaqooyinka qaar. Waxaan rajeynayaa inay wadaagaan xalka haddii qof helo. Salaan!
Ka dib cusbooneysiinta aan sameeyay, ma sii wadi karo wi fi, waxaan horeyba u cusbooneysiiyay macruufka nooca ugu dambeeyay waxna laguma xalin karo hadda kumana xirmi karo wifi kaliya xogta aan sameeyo marka xogta la helo. dhameeyay sidaan wax u hagaajin karo
FADLAN CAAWI mar kasta oo aan ku xirnaado shabakad oo aan dhigo erayga sirta ah ee saxda ah, waxay ii daahfureysaa in erayga sirta ahi khaldan yahay, wax xal ah ma haysaa ??? i caawi fadlan 🙁
Waxaan hayaa iPhone 6 mana doonayo inuu wifi ka shaqeeyo, waa Gray, waxaan geeyay dukaanka iizone ee ku yaal wadankayga Dominican Republic, bil iyo badh ka dib, waxay ii sheegeen inaysan xal u hayn, taasi IPhone-ku jawaab uma helin kiiskan, taleefanka gacantu kuma hoos jiro damaanad; laakiin anigu diyaar ayaan u ahaa inaan bixiyo wixii lagu hagaajinayo.
Waxaan jeclaan lahaa cinwaanka inaan kula xiriiro iPhone.
Ku jawaab Wilda
Waxaan hayaa IPHONE 6 macruufka 9.3.2 iyo calaamadaha Wifi ma muuqdaan illaa ay ka xigto router-ka mooyee. Waxaan horeyba isugu dayay dhamaan dejimaha kor lagu soo sheegay laakiin wali waa sidii hore.
Ma jiraa qof og waxa dhacaya?
Ma dhibaato farsamo ama nooca ayaa jirta?
Iyo maxaa la gudboon
Jawaab Mauricio Ruiz
Waad salaaman tihiin Mauritius, wax lamid ah ayaa kugu dhaca adiga, sifiican ayey aniga ila shaqeeyeen usbuuc ka hor wiffi iima xirayo ilaa aan isku soo dhejiyo router-ga, saaxiibkay wuxuu leeyahay iphone 6 kale oo leh isla iOS 9.3.2 isagu maya waqti dheer ayuu ku dhacayaa isaguna wuxuu helayaa ilaa 10 wifis oo anigu ma heli karo midkood, haddii ay xal helaan ama wax jiraan, ila soo socodsii, ma waxay ka iman doontaa macruufka mise waxay dhibaato ku noqon doontaa anteenada wifi?
Ku jawaab krysttina
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa 5s, wifi wuxuu si fiican ula shaqeeyaa macruufka 9.3.2 laakiin Bluetooth ma heli karo qalab kasta oo uu ku xirmo wuxuuna galayaa loop.
Waxaan haystaa 6 iPhone, laba 6s oo lagu daray, mid 6s, one6, mid 5s iyo 5c markaan cusboonaysiinaayo dhamaan laakiin 5c, wifi wuu guuldareystay, ma xirmayo ama waa la damiyay, laba Apple iPhone ayaan u badalay labo terminal oo cusub, iyo dhab ahaan isla waxbaa dhacaya, waxaan soo sheegay tufaax, laakiin jawaab uma hayo, marka niman yahow, iphone-kan wuxuu bilaabay inuu noqdo saxaro, tani waa i niyad jabisay …….
hello jose sidee ufiicantahay oo aan raadinayay xalka dhibaatadayda maadama aan haysto iphone 6 oo lagu daray.,.,. Waxay igu xireysaa Wi-Fi laakiin ma cusbooneysiin karo barnaamijyada ama wax ma soo dejisan karo, waxaan helaa fariin aan macquul aheyn oo aan ku soo dejisto barnaamijka. Hada barnaamijyadayda oo dhami aniga ima shaqeeyaan.,.,. Waxaan u galiyay macruufka 9.3.2 haddii ay dhacdo in la xalliyo oo aysan jirin wax dhibaato ah oo taagan. Waxaan isku dayay wax kasta oo ay ku yiraahdaan kanaalka ugu badan waxbana ..,. soo celi oo waxba.,. si fudud hadaan isticmaalo vpn dhibaatadii way baaba'day..la noqosho la'aan.,.,. waxa tufaaxu ku fashilmay.,.,., salaan,.,.
Markaad akhrinaysid dhammaan faallooyinka kujira qoraalkan, way cadahay inay jiraan dhowr ikhtiyaar oo loogu talagalay fashilka wifi: Dejinta qaabeynta, dhibaatooyinka noocyada iOS iyo dhibaatooyinka Hardware ee wi fi antenna.
Waa inaad isku daydaa wax walba si aad u ogaato cilladda ay Qalabkaagu leeyihiin
Saaxiibada wanaagsan, hadii inbadan oo naga mid ah ciladan leeyihiin, waxaan hayaa iPhone 5 mana aqoonsana calaamado badan oo Wi-Fi ah, waxaan hayaa calaamado yar, waxaan jeclaan lahaa inaad igu caawisaan talo ama xallin, fadlan, waxaan u baahanahay Wi -Fi. D:
Jawaab David Ortega
Runtii wax walba waan isku dayay, waxay kuxirantahay shabakada Wi-Fi laakiin ma socdo, taleefanka waxaan u soo celiyey warshad ahaan, waxaan soo celiyey goobihii shabakada, walina ma socdo ... Runtii waaya aragnimo aad u xun si daacad ah, waa iphone-kii labaad , kii hore wuxuu ahaa 5S sidoo kale maalin ilaa xigta waxaan joojiyaa isku xirka wifi .. uguyaraan kan aan haysto 6S ayaa isku xira laakiin ma dhex maro .. Waan necbahay inaan tufaax haysto.
Jawaab ku samee hugo: @
Xaaskeyga ayaa cusbooneysiisay iPhone-keeda waxayna leedahay dhibaatooyinka halkan lagu sheegay, ma aanan sameynin, kaliya waxaan ku bixiyaa maalin kasta anigoo hoos u dhigaya calaamadda yar ee ay iga codsato inaan cusbooneysiiyo laakiin waxaa fiican in taas la sameeyo intii dhibku ka soo gaaro.
MUHIIM: Waxaan isku dayay inaan arko waxa salka u ah dhibaatooyinkaan, oo ma ogtahay waxa ugu yaraan ka shaqeeyay kiiskeyga? Dib u cusbooneysii modemka, dami oo daar ama ka jari fiilooyinka ... Laba maalmood ka hor waxaan isku dayay tan xilliyada ugu sarreysa runtiina waxay tahay inay si layaableh u shaqeysay, horay waxaan ula xiriiray wifi laakiin ma aanan marin. Waan fahamsanahay inay jiraan wifi joogta ah oo, sidaan ognahay, ka shaqeeya hertz ama hertz, (GHz waa soo noqnoqoshada caadiga ah ee shabakada wifi) laakiin maxaa dhacaya, waxaa jira mowjadyo 5 iyo 2.5GHz ah, oo ah 5GHz kii ugu horeeyay waxaa loo heli karaa masaafada ka gaaban mana taageerto aalado badan. Tixgeli isku xirnaanta aad leedahay iskuna day inaad dib u dejiso modemka. Salaan ka dib waxaanan rajaynayaa inaan kaa caawiyo si kasta oo ay tahay.
Aah! Waan ilaaway, tani waa qaab tijaabo iyo qalad ah, maadaama maalmaha ay sii socdaan waxaan sii wadi doonaa inaan tijaabiyo hawlgalka, daqiiqada ay sidan u shaqeyso. Waxaan rajeynayaa inay taasi tahay dhibaatada, malaha iphone-ka wuxuu taageeraa mowjadaha aanan wali fahmin, laakiin fikradda ayaa ah.
Talo fiican oo fiican. Ikhtiyaarka lagu joojinayo Kaaliyaha WiFi ayaa ii shaqeeyay. Aad baad u mahadsantahay !! Wax xanaaq ah kama qabo iPad-kayga
Waxaan hayaa iPhone 6, cufan beddel iyo wifi oo joojiya shaqada 🙁 Hore ayaan uga soo celiyey iTunes walina waa isku mid, qof i caawin kara? Hadda waxaan ku jiraa barnaamijka 'IOS' 9.3.5. Dhibaatadani wax xal ah ma leedahay?
Juan Dhibaato isku mid ah ayaan qabaa!
Aniga ayey igu dhacday in wifi uu ka muuqdo cawl kadib markii la cusbooneysiiyey iPhone 10s Plus ilaa iOS 6, qof kale ma ku dhacday? Xalka ma taqaanaa?
Waa salaaman tahay Edgar, waxay ahayd inaan shaashadda beddelo toddobaad ka hor, laba maalmood ka dib waxaan cusbooneysiiyay macruufka 10 ka dib 3 maalmood oo aan si fiican u shaqeynayay wifi ma xirmo, markii ay calaamaddu isku xirnaato waa mid daciif ah iyadoon loo eegin sida ay u dhowdahay ee router-ka iyo waxaan isku daynay dhamaan xalalka suurtagalka ah ee qoraalkan, mana ka soocelin warshadda. Way iga sii xumaanaysaa, waxaan u imid inaan qaado si aan u arko haddii ay tahay anteeno waxyeello gaadhay markii shaashadda la beddelayo laakiin waxaan u malaynayaa inay tani tahay qalad IOS ah. Haddii aan xal helo waxaan qoraa, salaan.
U jawaab timir
Palma dhab ahaan isla waxbaa igu dhaca aniga waxaan hayaa iPhone 6, shaashadda wey bedeleen iminkana wifi fog igama qabanayo waa inaan ku dheganaado router-ka ama aan ka badnayn mitir iyo badh haddii qof xal u helo dhibaatada waan ku qanacsanahay faalladaada.
Ku jawaab Raizel
Wave !! Dhibaato isku mid ah ayaa i soo martay dhowr bilood ka hor, waxay ahayd inaan cusbooneysiiyo aaladda wifi-na wuu ku guuldareystay, waxaan u geeyay Apple si ay u hagaajiso iyagana mid cusub ayay i siiyeen, wuxuu ku jiraa damaanad! Taasna tayda kore waxay lahayd shaashad jaban wax lacag ahna igama aysan siin! Nasiib wacan iyo salaan
Waad salaaman tihiin, subax wanaagsan, walaashey dhibaato ayaa ku haysata iphone 6 in wifi, iyo waliba gps iyo mobilada xogtooda ay ku fashilmaan, xal ma loo hayaa dhibaatadan?
Jawaab Rodrigo Jaimes
Ma haysto meel aan ka fuliyo iTunes gurmadkan, nooca IOS ee aan haysto waa 10.3.2, waxayna ila tahay inay keenayso dhibaatooyin asal ahaan ka soo jeeda Wi-Fi, ma noqon kartaa in aan la xallin karin? Slds.!
TODOBAAD WAA INAY QAADATO MAS'UULIYADDA DHIBAATADAN OO AY SIIYAAN MACAAMIILYAASHA XAL. GURIGAYGA, WAAN LABO LAHAYN DHIBAATADAAS XANUUNKA LEH EE ISKU XIRIIRKA WIFI, IYO, SIDII AANAN KU HAYN WAKHTIGA, MAS'UULIYADDA DUKA SAMAYNAYA LAGA SII SAARAY, AQOONSADAHA, INAAD KAGA DHIGATO TELEFOONKA, WAQTIGA WAKHTIGA AH, IN AAD OGAATO IN AANAY AHEYN XAL.
MA RABO INA TOLO KALE INTAY NOLOSHEYDA SOO QAATO FANGORIA ...
xog warran00 shan dijo
Taleefoonnadan ayaa ah kuwo aad qaali u ah isla markaana la tuuri karo, ma sii jiraan oo waxa aad ku samayn karto khadka internetka ayaa xadidan
Laakiin waxaa jira dad doqon ah oo jaahil ah oo ay u iibsadaan sababtoo ah waxay dareemayaan qabow ama lacag badan, maxaa qallooca
Mid baan isticmaalay, waa wax laga xumaado, ANDROID ayaan lasocon doonaa !!!!
Jawaab ku siiya ogeysiis00cinco
Waxba iima tarin, aniga waxay ila tahay waxa ugu xun ee maanta ku dhici kara taleefanka gacanta. : /
WAAN XALAY DHIBAATADA IPHONE SE